ချီလီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, စီးပွားရေး Startup & ဖွဲ့စည်းခြင်း
ချီလီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအကြံပေးချက်များနှင့်ဖွဲ့စည်းဖို့ entity ၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းအထောက်အကူဖြစ်စေအရိပ်အမြွက်နှင့်ချီလီအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာနှငျ့ ပတျသကျ. ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ကအခြားရှုထောင့်စုဝေးစေမည်။
ချီလီစည်းမျဉ်းများအရ, ထားတဲ့ entity ၏မိတ်ဖက်များ၏ 100% နိုင်ငံခြားသားများနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ entity ရဲ့ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကချီလီတစ်ခုသို့မဟုတ်ချီလီနေထိုင်ရာနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားဖြစ်ရပါမည်။
2014 ခုနှစ်တွင်ချီလီကွန်ဂရက်ရှယ်ယာရှင်-Level ဝင်ငွေအခွန်ကွန်ပျူတာနှစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများအပါအဝင်ချီလီအခွန်စနစ်သိသိသာသာအပြောင်းအလဲမိတ်ဆက်ပေးသောသိသိသာသာအခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး, ပြဋ္ဌာန်း။
ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်း Attribution-အခြေခံရှယ်ယာရှင်အခွန်ကောက်ခံမှုသည်။ ဒီယန္တရားလက်အောက်တွင်ချီလီကုမ္ပဏီများသည်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှုန်းထားများမှာကော်ပိုရိတ်-Level ဝင်ငွေအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း-Level ဝင်ငွေအခွန်နှုန်းဟာလက်ရှိ 20% ကနေတဖြည်းဖြည်းတိုးပွါးလိမ့်မည်:
2014, 21% များအတွက်
2015, 22.5% များအတွက်
2016, 24% များအတွက်
2017, ငွေ-အခြေခံနည်းလမ်းအပေါ်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုနည်းလမ်းနှင့်ရှယ်ယာရှင်များအဘို့အ 25% အပေါ်ရှယ်ယာရှင်များအဘို့အ 25.5% သည်။
2018 နှင့်အနာဂတ်နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, ငွေသား-အခြေခံနည်းလမ်းအပေါ်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုနည်းလမ်းနှင့်ရှယ်ယာရှင်များအဘို့အ 25% အပေါ်ရှယ်ယာရှင်များအဘို့အ 27% ။
ဒီနည်းလမ်းကိုလက်အောက်တွင်ရှယ်ယာရှင်များဝင်ငွေထုတ်ပေးထားတဲ့အတွက်အခွန်နှစ်ကုန်အဖြစ်သူတို့ကိုစွပ်စွဲဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားအမြတ်အစွန်းသူတို့ဖြန့်ဝေနေကြသည်ဖြစ်စေဘဲရှယ်ယာရှင်အဆင့် (ဒါခေါ် '' ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုနည်းလမ်း ') မှာအခွန်ကောက်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ entity အဆင့်မှာ paid နောက်ခံကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေအခွန်နောက်ဆုံးရှယ်ယာရှင်အခွန်ဆန့်ကျင်အားလုံးအခွန်ထမ်းများအတွက် Credit ဖြစ်နေဆဲ, ဒါကြောင့်စုစုပေါငျးချီလီင်ငွေအခွန်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး 35% နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာစစ်အစိုးရကဇန်နဝါရီလ 1, 2017 အပေါ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒုတိယနည်းလမ်းကငွေသား-အခြေခံရှယ်ယာရှင်အခွန်ကောက်ခံမှုသည်။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာယန္တရားအောက်၌တစ်ဦး 27% ကော်ပိုရေးရှင်း-Level ဝင်ငွေခွန် (cit) ငွေသားဖြန့်ဝေအပေါ်ချမှတ်ထားသော 35% ရှယ်ယာရှင်-Level အခွန်အတူသက်ဆိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ cit ၏ 65% ကို 35% ရှယ်ယာရှင်-Level အခွန်ဆန့်ကျင် Credit ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြန့်ဖြူး entity အဆိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုနည်းလမ်းလျှောက်ထားရန်ရွေးကောက်ပွဲစေသည်မဟုတ်လျှင်နိုင်ငံခြားရှယ်ယာရှင်များများအတွက် default အယန္တရားယေဘုယျအားဖြင့်, ထိုငွေသား-အခြေခံယန္တရားဖြစ်လိမ့်မည်။
ကုမ္ပဏီကချီလီဥပဒေရေးရာ entity အဖြစ်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်ချီလီအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု run နိုင်စေဖို့ပါ။
တစ်ဦးချီလီ Entity ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်ခြေလှမ်းများ
တရားဝင် entity ၏ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း
ချီလီစည်းမျဉ်းများထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမိတ်ဖက်များနှင့်ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများသည်အကြားအခြားနည်းလမ်း၏လုံလောက်သောအကွာအဝေးအတွင်းကျနော်တို့မကြာခဏ SHARE BY (SPA) ကုမ္ပဏီတစ်ခု COMPANY ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်အကြံပြု
ဒါဟာတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရှယ်ယာရှင်များရှိနိုငျသောဥပဒေရေးရာစီးပွားဖြစ် entity ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုချက်ချင်းဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံထို့နောက်သစ်ကို entity အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ယူဆမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အသုံးပြုပုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းမယ်လို့ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နိဂုံးချုပ်အပျေါမှာမူသောငါတို့၏ကုမ္ပဏီတခု၏ဝန်ထမ်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ထည့်သွင်းဖို့ပါလိမ့်မယ်။
ဝေစုအားဖြင့်ကုမ္ပဏီ (SPA) ကုမ္ပဏီ
ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားမိတ်ဖက်။ တစ်ဦးကကုမ္ပဏီမသက်ဆိုင်တစုံတယောက်သောသူသည်ရှိစေခြင်းငှါပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ပါဝင်မှုများ, မည်သည့်ပြင်ဆင်ချက်အားလုံးမိတ်ဖက်ကအတည်ပြုမည်အကြောင်းလိုအပ်သည်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောမိတ်ဖက်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် 1% ပိုင်ရှင်တစ်ဦး 99% ပိုင်ရှင်တူညီသောအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကစတော့အိတ်ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောရှယ်ယာရှင်များကဖွဲ့စည်းကြောင့်တစ်ဦး 51% အများစု၏အတည်ပြုချက်လိုအပ်ပြီးနှင့်ရှယ်ယာရှင်များ၏သုံးပုံနှစ်ပုံအထိအချို့သောကိစ္စရပ်များအဘို့ပြုပြင်မွမ်းမံရမည်။
ဝေမျှမယ် (SPA ကုမ္ပဏီ) ကကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောရှယ်ယာရှင်များနှင့်အတူတည်ရှိမယ့်မြို့တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဤအမျိုးအစားသည်ယခင်ကကရှင်းပြသည်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည်မသက်ဆိုင် entity အမျိုးအစား၏, တူညီတဲ့အခွန်ကုသမှုရှိသည်။
ကျနော်တို့ကအောက်ပါသိရန်လိုအပ်သည့် entity ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်:
စာလုံး SpA နှင့်အတူအဆုံးသတ်သင့်ကုမ္ပဏီ၏နာမတော်ကိုဖွစျစနေိုသော entity ၏နာမကိုအမှီ
ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျဉ်းနှင့် entity သို့လှူဒါန်းခဲ့ခံရဖို့မြို့တော်ညွှန်ပြပေးရန်လည်းလိုအပ်ပေသည်။
ကျနော်တို့ပေးနိုငျသောရှေ့နေကနဦးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်လုပျထုံးလုပျနညျးအဘို့တာဝန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ချီလီစည်းမျဉ်းချီလီသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားသား, သေးချီလီ၏နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်လိုအပ်သကဲ့သို့ဤလူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းဥပဒေကြောင်းအရကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဗီဇာရယူသည်အထိဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်နောက်ဆုံးမှလိမ့်မယ်။
ဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်လိုအပ်သောအချိန်: ဒီနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းအောက်မှာကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်ပေါင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထဲမှာ 15 run ဖို့အဆင်သင့်နိုင်ပါတယ်။
ဆွဲသွင်းပါဝင်ဘို့ခန့်မှန်းခြေကြေးအမေရိကန် $ 2200 အကြားကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင်နှင့်အမေရိကန် $ 3500 ဖြစ်ပါသည်, ကုမ္ပဏီနှင့် client များမူတည်ပါသည်။
ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး: အမေရိကန် $ 990 နှင့်အမေရိကန် $ 1800 အကြား၏လစဉ်ကြေးတိုင်းခြောက်လကြိုတင်ပေးဆောင်။
နေ့စဉ်ခြောက်လကြိုတင်ပေးဆောင်ဥပဒေရေးရာလိပ်စာအမေရိကန် $ 500 လစဉ်ကြေး။
ကနဦးအခြေချတစ်လအတွင်းမှာတစ်လလျှင်အမေရိကန် $ 600 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေခြင်းဖြစ်သည်အထိပါပဲ။ အဆိုပါအခကြေးငွေအသီးသီးကိုပမာဏပေါ် မူတည်. ပြုပြင်ထားသောလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတော့အိမ်သူအိမ်သားစာရင်းကိုင်တစ်ဦး၏ငှားရမ်းအကဲဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
ချီလီအတွက်ကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်မှုချီလီအတွက်နေအိမ်သို့အတူချီလီတစ်ခုသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားသားတို့လက်၌ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလိုအပ်ချက်စစ်ဆေးမှုများဆွဲအပေါင်းတို့နှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း, အခွန်နှင့်အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအဘို့အနိုင်လိမ့်နိုင်ရန်အတွက်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ အပါအဝင်သေးကန့်သတ်ဘဲ, အစသည်တို့ကို, ငွေတောင်းခံလွှာနေမှုကိုချေဖျက်ခြင်းနှင့်ကို authorize တစ်အခွန်တစ်ဦးချင်းစီအရေအတွက်ကရယူဖို့
ဤသည်အုပ်ချုပ်ရေးသည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီအတွက် Controller ကိုတစ်ဦးအနေအထားအတွက်မန်နေဂျာနှင့်အတူသရုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင်လည်းအနာဂတျမှာဆက်လက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အစပိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီအခြေခံအားဖြင့်အခွန်အရေအတွက်ကရယူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပြေးဖွင့်ဖို့ပါမစ်ရယူဘို့, ချီလီ၌အကြှနျုပျတို့၏ရုံးခွဲများအတွက် domiciled နိုငျသညျ။
ချီလီဗဟိုဘဏ်၏နိုင်ငံခြားသုံးငွေစည်းမျဉ်း Compendium ၏အခနျး XIV ၏စည်းမျဉ်းများ။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာအခွန်ဝန်နှင့်ဝင်ငွေအထောက်အထားအပေါ်အကွံဉာဏျမြားအပါအဝငျမြို့တော်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်၏ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်, များအတွက်အခွန်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအခြားရွေးချယ်စရာအဆိုပြုနိုင်ပါတယ်။
ခ: အမေရိကန် $ 900
ကုမ္ပဏီတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းခဲ့ပြီးပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ဒေသခံတစ်ဦးစီးပွားဖြစ်ဘဏ်ထဲမှာချီလီပီဆိုသို့မဟုတ်အမေရိကန် $ ဒေါ်လာတစ်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ အင်တာနက်ကတဆင့်သငျသညျ, ထို့နောက်ထိန်းချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ဤအကောင့်ထဲမှာငွေပေးချေမှုလုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အခကြေးငွေ: အမေရိကန် $ 900
အမေရိကန် $ 2500 တပမာဏလိုအပ်တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းများအတွက်ရယူဗီဇာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခကြေးငွေ။
ချီလီ ID ကိုအခွန်အရေအတွက်ကိုသောမိတ်လိုက် (ROL UNICO TRIBUTARIO), အားလုံးနိုင်ငံခြားရှယ်ယာရှင်များအားဖြင့်ရရှိသောနှင့်လည်းကုမ္ပဏီအဘို့အရမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကဆိုပါတယ်အရေအတွက်ကရယူနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ အခကြေးငွေ: အသီးအသီးအဘို့ကိုအမေရိကန် $ 350 ။
အဆိုပါစံရှေ့နေအခကြေးငွေတစ်နာရီကို $ 350 အမေရိကန်များမှာ
ကျနော်တို့ချီလီအတွက်သင့်ကုမ္ပဏီ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဒေသခံတစ်ဦးဥပဒေရေးရာ entity ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်ထက်အများကြီးပိုလိုအပ်တယ်, ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုအလုပ်သမားစည်းမျဉ်းများအပါအဝင်ဥပဒေရေးရာနှင့်အခွန်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးကိစ္စရပ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေး clients များနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြကြောင်းအာမခံနိုင်မယုံကြည် စာရင်းကိုင်ကိစ္စရပ်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pluses ၏နောက်ထပ်ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအများအပြားအရှိန်မြှင့်ဖို့ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။